I-Auto Fabrica Yakha ii-Bikes eziqhelekileyo kwigalari ye-MB & F.
Ukuzisa iiMoto zeMoto ze-Auto Fabrica ze-MB & F MADGallery
Abakhi beebhayisiki iGazmend Muharremi kunye noBuar Muharremi kunye nezidalwa zabo ezinamasondo amabini. UJonathan Fenton
I-Auto Fabrica yi-ultra-low volume yeBritish yokwakha isithuthuthu esakhiwayo esakha izithuthuthu ezithandekayo . Ukuvelisa phakathi kweebhayisikili ezi-8 no-12 ngonyaka, iqela lobuzalwana beBuar kunye neGazmend Muharremi basebenzisa i-capital-based base-London ukuguqula iibhayisikili eziqhelekileyo zibe yimisebenzi emibili yobugcisa.
Ezi zithuthuthu ezimbini - Uhlobo lwesi-6 kunye nohlobo lwe-8 - aluphawulekayo kuphela ngenxa yokwakha kwabo ngokupheleleyo (kuthathe iinyanga ezili-6 ukudala nganye), kodwa ngenxa yokuba yenziwe yile ncinane kwaye yakhiwe. Ngokuphefumlelwe yimisebenzi yeenqwelo-moya ze-automobile Ettore Bugatti , abazalwana basebenzisa igama elithi "Thayipha" ukutyhilwa nganye yendalo yabo, njengoMnu Bugatti.
Uhlobo lwe-6 luqalise ubomi njengo-1979 i-Yamaha XS650, kwaye uhlobo lwe-8 lwaluqala ngo-1981 Honda CX500. Makhe sijonge ngokubhekiselele kule mabini amabhayisikili ahle kakhulu.
Uhlobo lwe-Auto Fabrica 6
Uhlobo lwe-Auto Fabrica 6. U-Julien Brightwell
Nantsi umbono wepropati yohlobo lwe-6. Hlasela ngokukhawuleza kwinqanaba elingaphandle kwe-tank fuel kunye ne-saddle, kwaye uza kubona iteksi elincinci. Le ndawo yayiyikuphefumlelwa kwe-bhisikidi yebhayisiki yonke, yaye ekuqaleni yayijoliswe ekusebenzeni njengomoya wenkunzi yegusha kwi-injini. Nangona kunjalo, idizayini ibonakaliswe ngokugqithiseleyo kunokuba yenzelwe okokuqala, ngoko le nto yancitshiswa kulo mqondiso omncinane kakhulu. Ukuze kugcinwe ukubukeka okubonakalayo, itanki kunye nesiseko sesitulo senziwa ngokutshintsha ngesandla ngesandla se-aluminium.
Nangona ezinye zezinto zibonakala ngokubonakalayo kwibhayisiki yokunikela, izixhobo zeithuthuthu zenziwe ngezandla ezikhethekileyo. Ngokomzekelo, insimbi engenasici yokuphatha imivalo, iinqonga kunye neefoloko zefoloko kwi-Type 6 zidalwe ngabakhi. Injini yakhiwe kwakhona ngokusebenzisa i-piston ye-0.5-oversize, kunye nayo yonke into eyenziwe nge-castings kunye ne-aluminium.
Ukudibanisa izakhono zabo ezikhethekileyo kwenza ukuba abazalwana baveze i-niche yabo ngokwamamayela ngaphandle kohlobo oluqhelekileyo olwenziwa ngabaakhi besiko. Kodwa ngaphambi kokuba nayiphi na ibhayisikili inxalenye ithathwa, uBujar kunye neqela lakhe bachithe ixesha elide kwi-design, beqala ngokukhangela ngezandla baze bathuthele kwiingubo ze-Photoshop ukuze benze ibhayisiki ebonakalayo phambi kokuba umsebenzi wequmrhu lothando luqale.
Uhlobo lwe-Auto Fabrica 8
Uhlobo lwe-Auto Fabrica 8. U-Jonathan Fenton
Uhlobo lwe-Auto Fabrica 8 lusekelwe kwi-Honda CX500 ka-1981, kwaye isebenzisa iipayipi zokukhupha izityela ezingenasiplastiki ukuze zenze ukhangelelwano oluhluke ngokupheleleyo oluvela kuluhlu 6. Abazalwana baxelelwe ngemifanekiso yendalo ye-20th century. Bathi: "Sasiqala ngokuthatha isinyathelo esilandelayo kwizinto zobuchwepheshe zanamhlanje kwaye sibheke ngokwenene kumatshini omhle." Ixesha kunye nexesha kwakhona safikelela kwizigqibo ezifanayo: izithuthi ezithathwa njengezona zintle kakhulu kwaye zibiza kakhulu iimoto kunye namabhayisikili e-golden eras phakathi ko-1910 nakuma-1980. "
Iibhayisikili eziqhelekileyo ze-Auto Fabrica zidinga ubuninzi bezandla zabasebenzi. UJulien Brightwell
Abazalwana abazifundisayo bazenza i-panel--beat and-forming. Nangona inkampani yaqulunqwa ngokusemthethweni ngo-2013, ishishini labo lalide ixesha elide ngaphambi kwaloo nto. Ubunzima bokudala ezi iibhayisikili zivela kwinto yokuba ezininzi zalezi zindlela "zilahlekile" kubachwephezi banamhlanje - oko kukuthi, isetyenzisi sezinto ezicacileyo ukuba kuthatha inzame kunye nephutha ukufika ngendlela efanelekileyo yokwenza izinto.
Indlela Yonke Iza Ngayo
Imijelo kunye neenguqulelo zikhuthaza ukusetyenziswa kwangempela. UJulien Brightwell
Ukudibanisa izakhono zabo ezikhethekileyo kwenza ukuba abazalwana baveze i-niche yabo ngokwamamayela ngaphandle kohlobo oluqhelekileyo olwenziwa ngabaakhi besiko. Njengoko unokucinga, kukho ulungelelaniso oluthile oluya ekucingeni nasekwakha lezi zinto ezidalwa ngcamango. Iqela leBujar Muharremi liqala ngeemifanekiso zesikhokelo, ngoko kudala ukuguqulelwa kwe-Photoshop ukukhulelwa kwebhayisikili kwindawo ebonakalayo ngaphambi kokuba umsebenzi onzima wenyama uqale.
Kwimeko yohlobo lwe-6 kunye nohlobo lwe-8, izidalwa ezimbini zezidalwa ziboniswa kwi-MADGallery e-Geneva, eSwitzerland, apho umdali ongumlindo ophezulu wokugcina u-Max Busser usebenzisa indawo yokubambisana yokubhiyozela zonke iintlobo zobugcisa bekinetic. Ukuba unomdla wokuba omnye okanye zombini la mabhayisikili awakhiwe ngokugqithiseleyo, ayafumaneka ukuthengiswa kuma-CHF 80,000 (okanye malunga ne-$ 83,300 zamaRandi, kumaxabiso okuguqula namhlanje.
Yintoni Inkcazo yokungasebenzi?
Yiba ('ve') ne
Ukusetyenziswa Kwezinto ezininzi ngesiNgesi
Imfazwe yaseBusika: Ukufa Kwiqhwa
Ngaba Uthintele iLiquid Mercury?
Umculo weXesha lama-20
Ii-Subgenres zePunk Rock